Yakha iKlasi yeHlabathi elifudumeleyo nelingabhubhisiyo
Iindlela ezili-10 zokuncedisa abafundi ukuba bazivakalise
Ukudala indawo yokufundela engasongelayo, nakhu izicwangciso ezihlanganisiweyo ezivela kubafundisi abaye bafumana ixesha elifudumeleyo nabamkeleyo kubafundi babo imihla ngemihla.
Iindlela ezili-10 zokudala iZiko loLondolozo lweeNkalo ezingabhubhisiyo
Unokuqala ngokudala indawo efanelekileyo ekufundeni nasekuphuculeni ukukhula kwabafundi kunye nokufunda kwizifundo ezi-10 ezilula:
Nibingelele abafundi bakho ngalunye usuku ngomdla. Fumana into enokuthi uthethe ngokubanzi okanye kuninzi ixesha eliya kuluvumela.
Ukubonelela abafundi ngexesha lokubelana ngeziganeko, iziganeko okanye izinto kunye nawe. Nangona ubeka ixesha elithile kwinqanaba ngalinye kubafundi aba-3-5 ukuba bahlanganyele, kuya kunceda ekwakheni imfudumalo ebushushu, kunye neendawo ezamkelekileyo. Kubonisa ukuba uyabakhathalela kwaye ikunika amathuba okufunda malunga noko kubalulekile malunga nabafundi bakho.
Thatha ixesha ngethuba lokuxelela into ebalulekileyo kuwe. Oku kungaba yinto yokuba umntwana wakho uthatha amanyathelo abo okuqala okanye ukuba uyibone umdlalo omhle ongathanda ukuwabelana ngawo nabafundi bakho. Abafundi bakho baya kukubona njengomntu onyanisekileyo nophathayo. Olu hlobo lokwabelana alufanele luyenze yonke imihla kodwa kunokuba lusexesha elide.
Thatha ixesha lokuthetha ngantlukwano ngaphakathi eklasini. Ukwahlukahluka kuyo yonke indawo kwaye abantwana banokuzuza ngokufunda malunga neentlukwano ebuncinane kakhulu. Thetha ngokuhluka kweemvelaphi zenkcubeko, umfanekiso womzimba kunye neentlobo, iitalente, amandla kunye nobuthathaka. Nikeza amathuba abafundi bakho ukuba babelane ngamandla abo kunye nobuthathaka. Umntwana ongenako ukuhamba ngokukhawuleza unokukwazi ukudweba kakuhle. Ezi ngxoxo kufuneka zihlale zigcinwe ngokufanelekileyo. Ukuqonda ukuhlukahluka kubomi bonke abantwana baya kuzuza rhoqo. Yakha ithemba kunye nokwamkelwa eklasini.
Yithi cha kwiindlela zonke zokuxhatshazwa. Akukho nto enjengokumkela, ukukhusela imeko xa kukho ukunyamezela ukuxhatshazwa. Yeka ngokukhawuleza kwaye uqinisekise ukuba bonke abafundi bayazi ukuba kufuneka baxele ingxelo yokuxhatshazwa. Mkhumbuze ukuba ukuxelela umntu onokuxhaphaza akukhiphi, ukubika. Yiba nemigangatho yemigaqo kunye nemithetho ekhusela ukuxhatshazwa.
Yakha imisebenzi kwimini yakho exhasa abafundi basebenzisene kunye nokwakha isithandane. Umsebenzi weqela elincinane kunye neqela elisebenzayo kunye neendlela eziqhelekileyo kunye nemithetho kuya kunceda ekuphuhliseni indawo ehambelanayo.
Gxininisa ngamandla xa ubiza umfundi. Ungalokothi ubeke umntwana ngenxa yokungakwazi ukwenza into ethile, thabatha elinye ixesha ukuxhasa umntwana. Xa ucela umntwana ukuba abonise okanye aphendule into ethile, qi ni sekise ukuba umntwana usemgangathweni wendalo, uhlale ehlaziya ngamandla. Ukubonisa ububele kubo bonke abafundi bakho kubaluleke kakhulu ekukhuseleni ukuzithemba nokuzithemba.
Ukukhuthaza ukuhlonipha ezimbini. Andikwazi ukuthetha ngokwaneleyo malunga nokuhlonipha ezimbini. Ukuthobela umgaqo wegolide, qho ubonakalise inhlonipho kwaye uya kuwubuyisela ngokubuyisela.
Thatha ixesha lokufundisa iklasi malunga neengxaki ezithile kunye nokukhubazeka. Ukudlala indima kukunceda ukuvelisa uvelwano kunye nenkxaso phakathi kwabafundi ofunda nabo noontanga.
Yenza umgudu wokukhuthaza ukuzithemba nokuzithemba phakathi kwabafundi bonke eklasini. Nika udumo kunye nokuqiniswa okuqinisekileyo okwenene kwaye kufanelekile. Okugqithiseleyo ukuba abafundi baziva kakuhle ngabo, bhetele baya kuba nabo kunye nabanye.
Ngaba sele wenze zonke izinto ezibhalwe ngentla? Ngoku ulungele ukuba Ngaba Ungumfundisi oPhezulu weMfundo ePhambili?
Ziyintoni ukuBhaliswa kweKhonkco?
Oko Abafundisi Akufanele Bakuthethi okanye Benze
Ukujongana nokuBoniswa koLuntu koThando eSikolweni
Ukubuza Imibuzo Inokuphucula UkuVavanywa kootitshala
Ukufumana ithuba lokuqhuba uNgqongqoshe
Izambatho ze-Ski-Do and Do not
Umoya yoNxibelelwano kunye neziLwanyana eziMnyama
Thatha iHootted Vacation
USamson - uMgwebi nomNaziri
Konke Ngo-Amrit Sanchar i-Khalsa Initiation Ceremony
Iimpawu ezikhuthazayo zokusebenzisa xa ufuna ukuthetha, 'Carpe Diem!'
I-Spectrum yoKhanya-mbonakalo-Imbonakalo kunye neKhadi
2007 Chevy Silverado Igalari yeSithombe
Yintoni iLa Nina?
Iindaba ezimbi malunga neZikolo eziHununyiwe
Qalisa abantwana kwiMimoya ngeMaphepha ombala
Kutheni i-Mole kwiKhemistry ibizwa ngokuba yiMole?
Inkcazo yebali "elilahlekileyo"
Iinkcukacha Ezilishumi malunga neMfazwe yaseMexico naseMelika
Indlela yokubhala iPhepha lePhepha
'UKumkani weNtaba' Imifanekiso
Uhlalutyo lwaBantu: UWilly Loman "Ukususwa kwe-Salesman"